Politika · Aogositra, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Aogositra, 2021
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Aogositra, 2021
Iràna 30 Aogositra 2021
Ilay lehiben'ny fitsaràna fahiny tao Iràna, sady lehiben'ny sampandraharaham-pitsaràna ao anatin'ny fitondràna no nandresy tamin'ny fifidianana ho filohampirenena natao ny 19 Jona. Fandresena niezinezina
Azia Afovoany sy Kaokazy 29 Aogositra 2021
Niampanga an'i Azerbaijan ho nanitsakitsaka ny fampitsaharana ady tany Nagorno-Karabakh ny Minisiteran'ny Fiarovana Rosiana satria nitombo hatrany ny fifandonana teo amin'i Armenia sy Azerbaijan.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Aogositra 2021
Nandresy an'i Shina tamin'ny set 3–0 ny ekipan'i Torkia vehivavy amin'ny volleyball, malaza ho "Soltànan'ny Harato," nandritra ny lalao olaimpika tao Tokyo tamin'ny 25 jolay.
Amerika Latina 25 Aogositra 2021
Lazain'ireo mpitsikera ny dobo filomanosana iray rava nandritra ny tafiotra mahery Maria tamin'ny 2017 fa ho averina haorina indray izy io, na mifanipaka amin'ny fepetra mifehy ny ara-tontolo iainana ao Pôrtô Rikô aza.
Amerika Avaratra 25 Aogositra 2021
Taorian'ny fialan'ny tafik'i Etazonia tao Afghanistan, nihazakazaka an-jotra ny Shinoa mpaneho hevitra hanoritsoritra ny fampitahana eo amin'i Taiwan sy i Kabul ao amin'ny media sosialy sy nanontany raha mpiara-dia azo ianteherana i Etazonia.